C/risaaq Juriile oo saaxiib dhow la ah Gudoomiyihii hore ee Barlamaanka Shariif Xasan oo sheegey inuu yahay Musharax u taagan xilka Afhayeenka Barlamaanka – idalenews.com
C/risaaq Osman Juriile oo ka mid ah xildhibaanada cusub ee Barlamaanka Soomaaliya, isla markaasna saaxiib dhow la ah guddooyihii hore ee barlamaanka Shariif Xasan Sheekh Aadan oo u waramaayey idaacada Bar-Kulan ayaa sheegey inuu yahay musharax u taagan xilka Barlamaanka. Isagoo ka hadlaayey sababta ku dhalisey inuu xilkaasi isu soo taago ayuu sheegey inuu yiri “Isbedel ayaan doonaayaa iyo nidaamka ku saleysan in beelo cayiman loo doorto jagooyinka sar sare ee dowladda uu yahay mid fashilmay oo u baahan in laga gudbo.”
C/risaaq Juriile oo muddo ka badan 13 sano ahaa xubin ka tirsan barlamaanadii kmg ee dalku yeeshey tan iyo burburkii Somalia hase ahaatee mar kale shanta sano ee soo socota ka mid noqdey barlamaankaan cusub ayaa dad badani isweydiinayaan isbedelka iyo nidaanka uu doonaayo inuu keeno iyadoo si aad ah loogu xasuusto in Juriile ahaa saaxiibka & la taliyaha gaar ah oo mar welbaa ku wehlin jirey Afhayaheenkii hore ee barlamaanka safarada iyo ka qaybgalka shirarka caalamiga.
Dadweynaha Soomaaliyeed ayaa qaba in Juriile musharaxnimadiisa ku aadan Afhayeenka barlamaanka tahay ujeedo guracan oo u adeegeysa dan shaqsi gaar ah leeyahay isla markaasna u gogol xaareyso heshiis hoose oo saaxiibkii Shariif Xasan Sheekh Aadan la galey si uu ugu guuleysto jagada Madaxweynaha Soomaaliya. Waxay sidoo kale dadweynaha Soomaaliyeed sheegeen in haddii Juriile doonaayo Isbedelka ku yimaado nidaamka Soomaaliya guud ahaan ay aheyd in xildhibaanada beeshiisa siiyo fursad ay kaga mid noqdaan barlamaanka iyo maamulka dowlada balse u muuqata in taas bedelkeeda ku noqdey caqabada hor taagan aqoonyahanada iyo dad kale ee waxgalka u ah dalka kana soo jeeda beeshiisa sidaas darteed Juriile uusan marnaba raali ka aheyn qof aan isaga aheyn soo baxo.
Xildhibaanada cusub ee baarlamaanka ayaa si aad ah ugu feejigan dibindaabyada siyaasadeed ee ay wadeen masuuliyiintii hore ee dowladda oo horey ugu fashilmey in si siman oo cadaalad ku jirto u shir gudoomiyaan barlamaanka iyo in barlamaanku guto waajibaadkii iyo shaqadii loo ikmaday balse taas bedelkeeda ka doortey dagaalo, fowdo joogto ah iyo kala qeybin dhexdooda ah taasoo masuuliyada ugu weyn uu lahaa hogaankii sare ee barlamaanka gaar ahaan Shariif Xasan Sheekh Aadan iyo koox yar oo la shaqeyneysey oo af dhuubey dhamaan howlihii barlamaanka isla markaasna hor istaagey inuu barlamaanku shaqeeya.
Doorashada Gudoomiyaha barlamaanka oo la qaban doono bishaan 26keeda ayaa waxaa u tartamaaya ilaa iyo dhowr musharax oo ay ka mid yihiin, Maxamed Rashid Sheikh Maxamed Sheikh Daadir, Cali Khalif Galeyr, Maxamed Osman Jawaari, Mustaf Dhuxulow iyo C/risaaq Jurile.